Fursadaha Deeq-La-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-La'aanta
Fursadaha maalgelinta ee barnaamijyada cuntada iyo nafaqeynta ee Oregon. Wixii ku soo kordha dib kala soco
Cuntooyinka Xagaaga iyo Dugsiga Kadib: Deeqaha Bilowga iyo Ballaarinta
Waaxda Waxbarashada Oregon Barnaamijyada Nafaqaynta Carruurta (ODE CNP)
Muddo dhowr sano ah, Sharci-dejinta Gobolka Oregon waxa ay u qoondeeyeen dhaqaalaha gobolka ballaarinta xagaaga iyo barnaamijyada nafaqeynta carruurta dugsiga kadib. Deeqaha aan tartanka ku jirin ee ilaa $20,000 ayaa la heli karaa inta lagu jiro biennium-ka 2017-19 ee hadda iyo kuwa cusub ee kafaala-qaadayaasha Barnaamijka Adeegga Cunnada Xagaaga, Barnaamijka Cuntada Khatarta Dugsiga Kadib, iyo Xulashada Xagaaga ee Xun
Codsiyada deeqda waxaa la aqbali doonaa si isdaba joog ah ilaa dhammaan lacagaha la bixiyo. Lacagta deeqda ah ee biennium-kan waa in la kharash gareeyaa Juun 29, 2019. Qalabka codsiga waxaa laga heli karaa Websaytka Waaxda Waxbarashada ama adiga oo la xidhiidha ODE CNP Khabiirka Deanna Poynor at [emailka waa la ilaaliyay]
Abaalmarinnada Fayoqabka Dugsiga Oregon
Waaxda Waxbarashada ee Oregon
Sannad kasta ODE waxay doorataa 3 ku guulaysta Abaalmarinta Wanaagga Dugsiga. Dugsiyadani waxay tusaale u yihiin hirgalintooda aadka u wanaagsan ee siyaasada fayoqabka ee degmada. Kafiilka abaalmarinta, Golaha Caanaha iyo Nafaqada ee Oregon waxa uu bixiyaa $2,500 iyo banner aqoonsiga guuleyste kasta.
Boorarka, shahaado saxeexan iyo abaalmarinta lacagta caddaanka ah ayaa lagu soo bandhigaa shirarka gaarka ah ee lagu qabto dugsiyada lagu guuleysto. Codsiga 2018-19 wuxuu furmayaa Oktoobar 2deeda.
Shidaal ilaa Play 60
Golaha Caanaha iyo Nafaqada ee Oregon
Ilaa $4,000 dugsigiiba ayaa loo heli karaa cunto caafimaad leh iyo waxqabadyada jimicsiga. Codsiyada dugsiga ayaa diyaar noqon doona online oo la filayo Noofembar 1, 2018 (codsiyada dugsiga ku salaysan), Rolling (codsiyada degmada). Codsiyada degmada waa la aqbalaa sanadka oo dhan.
Kala xidhiidh Golaha Caanaha iyo Nafaqada ee Oregon wixii macluumaad ah ee ku saabsan codsiyada degmadda ee la habeeyey kuwaas oo loo samayn karo laba ama in ka badan oo dugsi oo ku yaal degmo. Kala xidhiidh Erin Hirte at [emailka waa la ilaaliyay] ama Crista Hawkins at [emailka waa la ilaaliyay] su'aalo iyo xiiso leh.
Barnaamijka Deeqaha Bulshada
Deeqo gaaraya ilaa $2,500 ayaa diyaar u ah ururada iyo kooxaha siiya carruurta inay helaan khudaar iyo khudaar cusub dugsiga ka dib, maalmaha fasaxa ah iyo inta lagu jiro fasaxyada xagaaga. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo Shabakada United Fresh Start Foundation.
Buugaag cusub iyo agabyo loogu talagalay Goobaha Cuntada xagaaga
La Wadaag Awoodeena iyo Buuga Kowaad
Soo hel buugaag cusub barnaamijkaaga, kaliya waqtiga waxbarashada xagaaga! Waad ku mahadsan tahay taageerada C&S Grocers Jumlada, waxaad ka heli kartaa $100 oo buugaag bilaash ah Suuqa Buugga Koowaad! Si aad u dooratid buugaagtaada bilaashka ah, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa isdiiwaangeli. Raac tillaabooyinkan si aad ugu keento buugaag fiican goobta Cunnada xagaaga.
Saxeex! Qof kasta oo u adeega carruurta qoysaska dakhligoodu yar yahay dugsiga, goobta cuntada xagaaga, ama urur kale oo bulsheed waa u qalmi inuu ku biiro.
Booqo Suuqa Buugga Koowaad oo eeg noocyada kala duwan ee agabyada la heli karo.
Geli koodka SoS2017 ee gaadhigaaga wax iibsiga si aad uga qaadato ilaa $100 dalabka buugaagtaada! Fursadan maalgelineed ee gaarka ah waxay khusaysaa buugaagta oo keliya.
Deeqaha Dugsiga ee Carruurta Caafimaadka Qaba
Ficil loogu talagalay Carruur Caafimaad qaba
Deeqaha Quraacda Dugsiga: Abaalmarinada laga bilaabo $500 - $3,000 ayaa diyaar u ah dugsiyada si ay u taageeraan ka qaybgalka quraacda ee la kordhiyay.
Ciyaarta Ku Saabsan Deeqaha: Ilaa $1,000 ayaa diyaar u ah dugsiyada dhaqdhaqaaqa jimicsiga jirka iyo dadaallada nafaqeynta ee taageera dugsiyada si ay u noqdaan kuwo heer qaran ah oo loo aqoonsado horumarinta caafimaadka.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan u-qalmitaanka deeqda iyo hababka codsiga waxaa laga heli karaa bogga Action for Healthy Kids website.